Xiriirka Shiinaha iyo Bariga Afrika - BBC News Somali
Xiriirka Shiinaha iyo Bariga Afrika
11 Maajo 2014
Image caption Ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Keqiang
Madaxda dalalka Ugandha, Tanzania, Rwanda, iyo Koofurta Sudan ayaa maanta la filayaa inay ku soo biiraan madaxweyne Uhuru Kenyatta si ay heshiis wada jir ah la saxiixdaan Ra’iisul wasaaraha Shiinaha oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
Hogaamiyayaasha ayaa ku kulmi doono magaalada Nairobi, oo Mr Li uga bilaabtay booqasho seddax maalin ah.
Madaxweyna yaasha imaanayo Kenya oo kala ah, Yoweri Museveni (Uganda), Jakaya Kikwete (Tanzania), Paul Kagame, (Rwanda) iyo Salva Kiir (South Sudan) iyo wakiil ka socdo dowladda Burundi.
Masuuliyiintan ayaa ka wadaxaajoonaya arrimaha gobolka sida, nabadda, amniga, iyo horumarinta wadooyin ka.
Mashruuca qadka tareenka
Kadib kullannada , hogaamiyayaasha waxaa la filayaa inay si rasmi ah u saxiixaan heshiis ay balaayiin lacag ah ku bexeyso oo ah mashruuc lagu dhisayo qad tareen oo aasaas u noqon doona koboca dhaqaalaha dalalka Kenya, Uganda and Rwanda.
Dowladda Shiinaha ayaa dhankeeda la filayaa inay dhaqaale ugu deeqdo qorshaha dib u celinta qaxootiga Somaalida ee Kenya, sida uu qoray mid ka mid ah wargeysyada dalka Kenya.
Ra’iisul wasaaraha Shiinaha ayaa shalay Todobo iyo toban heshiis oo malaayiin dollar ay ku bexeyso la saxiixday dowladda Kenya.
Heshiiska la saxiixay ayaa taabanayo qeybo kala duwan oo kala ah dhaqaalaha iyo xiriirka diblumaasiyadda ay Kenya la wadaagto shiinaha si ay uga faa’ideysato dhaqaalaha qaaradda Aasiya.
Waxa uu ballan qaaday in dowladdiisa ay Kenya ka caawin doonto sidii xiriir dhaqaale oo aad u adag ula yeelan lahayd Shiinaha.
Isfahanka ugu weyn ee labada dowladood ay isla gaareen ayaa ahaa dhaqaalaha iyo xiriir dhanka farsamada ah oo aan la cadeynin qiimaha ku baxaya.
Xiriirka Kenya iyo Shiinaha
Sidoo kale, Mr Li ayaa sheegay inay 10 milyan oo dollar ku bixinayaan laanta ilaalada duurjoogta ee Kenya, kadib markii uu sare u kacay ugaarsiga duur joogta gaar ahaan maroodiga oo fooshiisa loo iib geeyo dalka Shiinaha, arrintaas ayuuna sheegay inay wax ka qaban doonaan.
Heshiisyada kale waxaa ka mid ahaa, in warshado gacan ka geysto wax soo saarka laga hirgeliyo Kenya. dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, iyo beeraha ayey sidoo kale Shiinaha ku bixineysaa lacago aad u badan.
Booqashada Mr Li ee Kenya iyo xiriirka labada dal ayaa calaamad u noqon karo in dowladda uu hogaaminayo Madaxweyne Uhuru Kenyatta ay weecisay xiriirkii ay la laheyd reer galbeedka, iyo isbedel lagu sameeyay siyaasadaha dibadda.
Intii lagu guda jiray doorashadii Kenya ee 2013-kii, qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa muujiyay inaysan ku faraxsaneyn in la doorto Uhuru iyo ku xigeenkiisa William Ruto oo markii dambe doorashada ku guuleystay, kuwaas oo maxkamadda ICC at u haysato dembiyo ka dhan ah aadanaha, inkastoo ay iska fogeeyeen aadaha.
Dowladda Uhuru Kenyatta ayaana u muuqato inay sii xoojineyso xiriirka Shiinaha, si ay dhaqaalo xoog leh uga hesho.